meatballs Homemade zifanekisela imfudumalo kwakubenza bazizwe benethezekile ka le umndeni. Lena iwukudla okuyintandokazi amadoda nezingane. Pheka kubo akunzima kangako, wena nje kufanele ufake Ngomzamo omncane futhi ukubekezela. Lokhu dish enemisebenzi muhle kunoma yiluphi uhlobo. Cutlets edliwayo piping hot, ezibandayo, bese usebenzisa i-sandwich. Bona ulingana noma side dish, imifino kanye okumnandi sauce okuzenzela.
A iresiphi elula for Burgers okuzenzela
Lona omunye izitsha ozithandayo inyama, okuyinto ilungele sokudla nomndeni nemikhosi. Futhi kuvela esiphundu kunazo Burgers inyama egayiwe okuzenzela, uzilungiselele kusuka ngokudlulisa zinhlobo ezahlukene. Udinga isigamu amakhilogremu inyama, anyanisi, amaqatha ambalwa isinkwa esimhlophe, iqanda, izinongo, isinkwa imvuthu, futhi 150 ml yobisi.
Ukuze uqale nge isinkwa esimhlophe ofakwe ngobisi, bese bahlanganise ke kuze bushelelezi. Three anyanisi on a grater noma gaya ngokusebenzisa grinder inyama. Beka inyama nengulube endishini uhlanganise anyanisi, isinkwa ofakwe, iqanda izinongo (usawoti, pepper). Manje uxove mass kahle (isandla engcono). Ngokulandelayo, akha Burgers okuzenzela - i ijamo ezingafanele. Endishini uthele ufulawa noma breadcrumbs. Ehlala patties bese Fry kwabo epanini.
Kukhona amathiphu ambalwa ukukusiza ukupheka Burgers okumnandi ekhaya. Okokuqala, basuke ethosiwe epanini esishisayo ne ukwengeza amafutha, hhayi ngamafutha. Uma usebenzisa breadcrumbs phambi ukuthosa, beka chops ku esiqandisini imizuzu engu-15. Kulokhu, akukho yasehlanzeni breading. Uma gazinga Burgers okuzenzela ohlangothini ngalunye, bese unamathela kuzo ngaphansi lid, wanezela amanzi kuya pan, bayoba juicier. Esikhathini yenkomo ukupheka cutlets udinga ukwengeza amanzi kancane noma ucezu namanzi ibhotela.
amakhekhe Fish ekhaya
Kodwa Burgers okuzenzela kungenziwa kuphekwe inyama nje kuphela kodwa futhi izinhlanzi. Ngenxa yalesi cod ekahle noma Pollack. Thatha ikhilogremu lenhlanzi nezibopho, clove ezintathu garlic, anyanisi ezimbili, nocezu lwesinkwa emhlophe, isipuni lwesinaphi, iqanda elilodwa, 50 amagremu ibhotela, ubisi, dill, izinongo, breadcrumbs sesame. Anyanisi nesweli uthathe cubes ezincane. Isinkwa ofakwe ubisi bese baya kancane yakhe ngawakhamela. Dill usike fake ngokwanele. Fish nezibopho ukusonta usebenzisa grinder. Uma wonke izinhlanzi ke pre-ahlukene inyama amathambo nomgogodla. Ngaphezu kwalokho ethosiwe anyanisi kuze kucace bese kukho garlic. Khona-ke, kufanele kufakwe esiqandisini. I nengulube izinhlanzi ukusabalala onion-garlic ingxube, amaqanda, isinkwa, lwesinaphi, dill kanye nezinongo. Ibhotela, ngaphambili chilled, ezintathu yashizi e isisindo ingqikithi. Manje uxove ingxube kuphekwe ngokuphelele. Uma kungenzeka, kungenzeka ukuba ebhodini ukuze ahlabayo. Thumela inyama okulungiselelwe nengulube imbala 20 amaminithi ukwakha eminye yasekhaya patties kusuka inhlanzi, ifofobaliswa nabo nenye Sesame kanye breadcrumbs. Fry ohlangothini ngalunye ukuthola uqweqwe okumnandi. It kuvela isidlo esimnandi kakhulu futhi esihlwabusayo. Ukuze Hlobisa ungathumela irayisi abilisiwe nemifino.
Eyodla Casserole iklabishi!
Adelais Bay Ihhotela 3 * (Protaras): izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa of izivakashi ezivela eRussia